Abavelisi bokuvavanywa kwengqibelelo yase China kunye nabathengisi | kinda
I-Integtest ® ii-serials zovavanyo lokunyaniseka ziyilelwe ukuvavanya ukuthembeka kweefilitha kunye neenkqubo zokucoca ulwelo. Uvavanyo luyahlangana ukuze kuqinisekiswe isihluzo sokubulala iintsholongwane kwi-FDA, State Pharmacopoeia kunye neemfuno ze-GMP. Umvavanyi wokunyaniseka kwe-V4.0 ulungile, uluncedo ekusebenziseni, kwaye sisixhobo sokuvavanya ukuthembeka esizenzekelayo, esenza inqaku lebhola, ukuhamba kwamanzi, indawo yokuphucula indawo, kunye novavanyo olusekwe emanzini lokucoca ulwelo. vavanyo lweefilitha ze-hydrophobic ukuhlangabezana neemfuno zabathengi ezahlukeneyo.
Utyikityo lobuchwephesha lobuchwephesha kunye nokuhlelwa ukwahlula uxanduva ngokulula, kunye nokuthintela ukusebenza okungeyonyani;
◇ Ukubonisa idatha yovavanyo kunye namagophe ngexesha lokwenyani, ukubeka esweni yonke inkqubo yovavanyo;
Ukubonelela ngokusetwa kokusetwa komsebenzi, umsebenzisi unokusebenza ngokulula nangokulula;
Test Uvavanyo olusekwe emanzini (WH) lweHydrophobic Filter: ukusebenzisa amanzi acocekileyo njengamanzi ovavanyo endaweni ye-IPA kunye ne-Ethanol, yiyo ke loo nto inokuthintela ubungakanani bokungcola kwe-ethanol okanye i-IPA xa kuvavanywa ukuhlelwa kweefilitha;
◇ Isixhobo sinokugcina iirekhodi ezingama-500 kunye negophe;
Uxinzelelo oluncinci lokusebenza
400mm (ubude) X380mm (ubunzulu) X335mm (Ukuphakama)
ICandelo: ± 4%; I-BP: ± 50mbar
V ye WH: ± 4%
Umthamo ophezulu: ± 4%
Ubushushu: 20 ℃ ± 15 ℃; Ukufuma: 45 ± 35%
Uvavanyo lwevolumu ephezulu: 5min ± 2min;
Uvavanyo olukhawulezayo D: 10min ± 2min
Uvavanyo lweSiseko seBP: 15min ± 2min
Uphuculo lovavanyo: 20min ± 2min
Input parameter kunye nedatha yokuphuma kunye neziphumo ngesiTshayina
Iirekhodi zovavanyo ezingama-500 + iigrafu zemizobo
5.7 ″; I-TFT, iyodwa
Uthotho lwe-I / O yohlobo
IsiTshayina okanye isiNgesi
Egqithileyo Isihluzi secapsule
Okulandelayo: Ukusonga Element yokuhluza engenanto